အသက်စာစောင် (ဓမ္မဒေသနာ) - ဆရာတော်လတ်ယေရှဲ
သင်တို့ နာမည်များသည် ကောင်းကင်၌စာရင်းဝင်သည်ကို ၀မ်းမြောက်ခြင်းရှိကြလော့၊
ကရာနီညနေခင်း (ဓမ္မတေး) - ဆန်ဖရန်လူငယ်များ
ဒီကမ္ဘာပေါ်မှာ အံ့ဘွယ်ရာ လူ သုံးမျိုးရှိနေတယ်။ သူတို့ဟာကမ္ဘာကြီးကို သံစဉ်များနှင့် အလှဆင်နေကြတယ်။ သူတို့သုံးဦးဟာပုံစံ၊ အကျင့်၊ လားလားမှမတူပေမဲ့ သဟဇာတဖြစ်စေတဲ့ သံစဉ်တွေကိုရောစပ် တီးခတ်ကြတာဟာ၊ဒီလူသုံးဦးထက်ပို့ပြီး သာယာတဲ့အသံတွေကို၊ ဒီကမ္ဘာပေါ်မှာ အဘယ်ဂီတပညာရှင်မှမတီးခတ်နိုင်ပါဘူး။
Read more: ကမ္ဘာပေါ်ရှိ လူ သုံးမျိုး - (စိုးလွင်ဦး Rev)
ကျမ်းစာဖတ်ခြင်း။ ယေရမိအနာဂါတ်တိ ၃၅း၁၆ - ၁၇ ရေခပ်သားဖြစ်သော ယောနဒပ် ၏ သားမြေးတို့သည် မိမိတို့အဘမှာထား သောစကားအတိုင်း ကျင့်ကြ၍၊ ဤ လူမျိုးသည် ငါ့ စကား ကို နားမထောင်သောကြောင့်၊ ဣသရေလ အမျိုး၏ ဘုရားသခင် ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား မိန့်တော်မူသည်ကား၊ ငါသည် ခြိမ်း သမျှသော
Read more: ဘိုးဘေး များ စကား (ဆူနာမီအောင့်မေ့ဘွယ်)-...
ခရစ္စမတ်သည် လူသားများအတွက် ဝမ်းမြောက်စရာအချိန် ဖြစ်သော်လည်း ဘုရားသခင်အတွက်ဝမ်းနည်းရသောအချိန်ဖြစ်ပေသည်။လူသားများ ထာဝရကာလ စိတ်ချမ်းသာပြီး ဝမ်းမြောက်နေကြသည်ကိုကြည့်မြင်လိုသောဆန္ဒပြင်းပြသဖြင့်မိမိ၌ တစ်ပါးတည်းသောသားတော်ကို ပေးရသည့်အချိန်ဖြစ်သည်။ ဝမ်းမြောက်စရာတစ်ခုကိုခံစားလို၍
Read more: ဓမ္မပညာအထောက်အကူပြုစာစောင် - ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၀၁၂...
Read more: Bible Study Is Dangerous Work by Rick Warren...
နှစ်သစ်၂၀၁၂အတွက်ကြီးမြတ်လှစွာသောကယ်တင်ခြင်း - ဆရာတော်လတ်ယေရှဲ
နှစ်သစ်မင်္ဂလါမှာမင်္ဂလါအပေါင်းနဲ့ ပြည့်ဝပါစေ-လို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။ ခရစ္စမတ်သံစုံသီချင်းတချို့ နဲ့ ၊ နှစ်သစ်ဒေသနာတပုဒ်ဝေမျှလိုက်ပါတယ်။
Read more: နှစ်သစ်၂၀၁၂အတွက်ကြီးမြတ်လှစွာသောကယ်တင်ခြင်း -...
စင်ကာပူပိုင် စိန့်ဂျွန်ကျွန်းပေါ်မှာ အလုပ် လုပ် နေတုံး ကျွန်တော့် ဟန်းဖုန်း ထဲမှာ Doyou want update date and time? ဆိုတဲ့စာသားလေး ဟန်းဖုန်း စခရင်ပေါ်မှာ အော်တော်မစ်တစ် ပေါ်လာတဲ့ အတွက် ကျွန်တော် ယောင်ပြီးyes, ok ဆိုတဲ့ ခလုတ်ကို နှိပ် လိုက်မိပါတယ်။မကြာခင် ကျွန်တော့် ဟန်းဖုန်း ထဲက နာရီဟာ ရှိရင်းစွဲ စင်ကာပူ စံတော်ချိန်ထက်တစ်နာရီ နောက်ကျ သွားတာကို သတိထားလိုက် မိပါတယ်။ ပထမ
Read more: စင်ကာပူပိုင် စိန့်ဂျွန်ကျွန်းပေါ်မှာ -...
Read more: ဓမ္မပညာအထောက်အကူပြုလစဉ်စာစောင် (Jan-2012)...
Rev. Aik Nap Tao
မလေးရှား၊ KLBC အသင်းတော်မှ ဒေသနာ (အကျဉ်းချုပ်)
တမန်တော်ဝတ္တု ၃း၆-၉ နာဇရက်မြို့သားယေရှုနာမတော်ဖြင့်ထ၍လှမ်းသွားလော့
ရှင်မသဲ ၉း၃၅-၃၉ နိုင်ငံတော်နှင့်ဆိုင်သောတရားဟောလျှက် .စပါးရိတ်စရာများစွာရှိကြသည်။ ရိတ်သောသူနည်းလှသည်။ စပါးရှင်ကိုဆုတောင်းရန်
၀လူမျိုးများကို အထူးသဖြင့် ကရင်ဆရာကြီးများက ကြည့်ရှုခဲ့ပါသည်။ ကချင်၊လားဟူ စသဖြင့် အမှုဆောင်များစွာ
Read more: သခင့်အလိုကိုသိခြင်း...
Read more: ခရစ်ယာန်လက်မောင်း ဆေးမှင်ကြောင်(Tettoo) -...
the lord's word 125 January 2012 (New Year), သခင့်စကား ၁၂၅ ဇန္န၀ါရီ ၂၀၁၂
သက်သေခံချက် - T.W.T (Leik Tho)
ကျမ အနည်းငယ် သက်သေခံချင်ပါတယ်။ ကျမက ရောဂါ အရမ်း ထူတဲ့ သူပါ။
စလုံး ရောက်တော့ရောဂါတွေ တစ်ခုပြီးတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးခန်း သွားပြတော့ဒေါ်လာ ၁၆၀ ကုန်သွားပါတယ်။ အဲဒါလဲ မသက်သာပါဘူး။ ကျမက ကက်သလစ်ခရစ်ယာန် တစ်ယောက်ပါ။ ကျမအတွက် Day off မရှိပါဘူး။ အဲဒီလို စိတ်အရမ်းညစ်နေတဲ့
Read more: the lord's word 125 January 2012 (New Year),...